Cookie Jam Blast™ New Match3Game | Swap Candy အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.4 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（131.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Cookie Jam Blast™ New Match3Game | Swap Candy
Cookie Jam ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ပွဲ ၃ ပွဲ၊ Cookie Jam Blast ကိုကစားပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောကွတ်ကီးများနှင့်သကြားလုံးများမှတဆင့်ပေါက်ကွဲမှု ၃ ဆင့်ရှိသည်။ ကွတ်ကီးများလဲလှယ်ပြီးဤချိုမြသောပွဲစဉ် ၃ စာဂတွင်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအားရစရာများကိုချိတ်ဆက်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ထားသောဂရပ်ဖစ်၊ ပျော်ရွှင်စရာပွဲစဉ်အသစ်ဂိမ်း ၃ ခုနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောသူငယ်ချင်းအသစ်များပါရှိပြီးသကြားလုံးကိုကြိတ်ခွဲပြီးအဆင့်သုံးဆင့်ကိုအောင်နိုင်ခြင်း။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်စရာပွဲစဉ် ၃ ပဟေgameိဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ဆုလာဘ်များကိုသော့ဖွင့်ရန်ကွတ်ကီးပဟေpiecesိဆန်သောအပိုင်းအစများနှင့်လဲလှယ်ခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းများ။ ကွတ်ကီး ၃ နှင့်အထက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးပေါက်ကွဲနိုင်သောသက်တံ့ရောင်စုံကက်စကိတ်များကိုအစပျိုးရန် boosters ကိုသုံးပါ။ သင်၏ကိတ်မုန့်အတွက်အရသာရှိသော cookie နှင့်သကြားလုံးချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြုလုပ်ရန်ချောကလက်ကိုခုတ်ယူပြီးပါဝင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးအရသာရှိသောဖျော်ဖြေမှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကွတ်ကီးများ၊ သကြားလုံးများ၊ ဂျယ်လီများ၊ ယို၊ ချောကလက်၊ ဤအခမဲ့ပွဲ3ဂိမ်းကို install လုပ်ပြီး cookie နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို FULL BLASTS တွင်ဆက်လက်ထားရှိပါ။
through ထောင်နှင့်ချီသောပျော်စရာပွဲစဉ် ၃ ဆင့်မှဖြတ်သွားနိုင်ခြင်း။ ပဟေtreatိအပိုင်းများကိုလျှို့ဝှက်ဆက်ဆံမှုများကိုရှာဖွေရန်
wheel ဆုပေးဘီးကိုလှည့်ရန်နေ့တိုင်းပြန်လာ၊ ပဟေlesိများကိုချေ ဖျက်၍ အရသာထူးသောဆုလာဘ်များရရှိသည်။ 🍪မြှင့်တင်သူများအတွက်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာကစားနိုင်သည်။ သင့်အားအဆင့်မြင့်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည့်အစွမ်းထက် Jelly Bees များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ cand သကြားလုံးပဟေpiecesိအပိုင်းအစများကိုပေါက်ကွဲစေပြီးကွတ်ကီးများကိုချေမှုန်းရန်ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောစွမ်းအားများကိုအသုံးပြုပါ။ iciousJam အရသာသကြားလုံးပဟေlesိများမှတဆင့်အရသာရှိရှိ nej.w ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။ သင်၏မုန့်ဖုတ်၌ Chef Panda နှင့်အတူအရသာကောင်းသောချိုချဉ်အသစ်များ social လူမှုရေးကိုရယူပါ။ သူတို့ကိုခက်ခဲသောအဆင့်များသို့အောင်နိုင်ရန်သူငယ်ချင်းများထံ Buddy Bees များပို့ပါ။ 🍪အထူးပွဲများတွင်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေထားသည့်လေယာဉ်ပျံများကိုစုဆောင်းပါ။ ဂိမ်းကစားခြင်းများတွင်သင်သည်အပြီးသတ် cookie နှင့်လိုက်ဖက်သည့် Saga ဂိမ်းနှင့်အတူပေါက်ကွဲလိမ့်မည်! ဒီအရသာရှိတဲ့ပွဲ ၃ ပဟေgameိဂိမ်းထဲမှာအရသာရှိတဲ့သကြားလုံးပဟေlesိတွေကိုဖြတ်ပြီးပေါက်ကွဲပါ။ Cookie Jam Blast ကိုယနေ့ download လုပ်ပါ။
Cookie Jam ပေါက်ကွဲမှုကိုနှစ်သက်လား? Jam City ၏ Disney Emoji Blitz၊ Cookie Jam၊ Panda Pop, Harry Potter: Hogwarts Mystery, Genies & Gems, Bingo Pop နှင့်အခြားများစွာသောဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်သေချာပါစေ။
COOKIE JAM BLAST, COOKIE JAM BLAST အမှတ်တံဆိပ်၊ သက်တန့်ကိတ်မုန့်ဒီဇိုင်း၊ COOKIE JAM BLAST ဇာတ်ကောင်များနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများသည် Jam City, Inc ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်များဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရပဲ အသုံးပြု၍ မရပါ။ © 2020, Jam City Inc. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ဘာအသစ်လဲ Cookie Jam Blast™ New Match3Game | Swap Candy 7.50.115